Basasha cas iyo cad.. Kee ufiican caafimaadka aadanaha? – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Basasha cas iyo cad.. Kee ufiican caafimaadka aadanaha?
Basasha cas iyo cad.. Kee ufiican caafimaadka aadanaha?
Midabada basasha waa kala duwan yihiin, markaa maxaa casaan ah, jaalle ah, caddaan ama xitaa cagaar ah Miyuu midabkani kala duwen muujiyey dabeecad ka duwan heerka nafaqo ahaan?
Warbixintaan, waxaan isbarbar dhigaa labo nooc oo ah basasha: guduud gudaha iyo dibedda, iyo jaale oo leh dambas dahab ah, laakiin dhinaca gudihiisuna waa caddaan midab leh, iyo sidoo kale basasha Ameerikaanka cad ee gudaha iyo dibedda.
Basasha cas waxay caawisaa la dagaallanka jeermiska iyo caabuqa, saliidahana waxay yareysaa darnaanta qufaca iyo bogsashada hargabka.
Basasha noocan ahi waxay yareysaa dareenka jirka, maxaa yeelay waxay ka kooban tahay maaddo caawineysa ka hortagga ficillada kiciya hormoonnada xasaasiyadda oo ay weheliso cuncun iyo san duuf leh. Waxay kaloo ilaalisaa caafimaadka wadnaha.
Basasha casaanka waxay yareysaa xaddiga kolestaroolka dhiiga, waxayna ka hortagtaa xinjirooyinka dhiigga iyo adkaanta halbowlayaasha, waxeyna caawineysaa ka hortagga sameynta unugyada kansarka, waxeyna taageerta nidaamka difaaca jirka.
Basasha cad waxay muhiim u tahay sunta bakteeriyada iyo jeermiga, waxay kaloo wax ka qabataa dhibaatooyinka neefsashada, sida caabuqa sambabaha, sanka iyo cunaha iyo sidoo kale trachea.
Basasha cad waxay yareysaa darnaanta astaamaha cudurka neefta, daaweyso hargabka waxayna ka caawisaa daaweynta qufaca iyo ka takhalusida cudurka qalliinka.
Basasha cad waxay door ka ciyaaraa bacrinta ragga, ayagoo kiciya wareegga dhiigga, iyo sidoo kale inay ka caawiyaan ka ilaalin unugyada jirka inay waxyeello gaadhin.
Basasha, wax alla wixii midabkoodu yahay, waxay ka kooban yihiin dhowr macdan iyo fiitamiino kaladuwan oo muhiim u ah jirka aadanaha, waana khudaar kaloriinkiisu hooseeyo.
Marka la eego faa’iidooyinka labadaba basasha casaanka iyo caddaanka, way adag tahay in laga tanaasulo labadaba, maxaa yeelay waxay ka kooban yihiin nafaqo aad u badan, in kasta oo midba midka kale uga duwan yahay.
Previous articleDeg Deg: Daawo: Dawlada aya ka masuula Dagaalka Galmudug
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo faray Hay’adaha Dowladda in la dardar geliyo Howlaha Gurmadka Fatahaadaha+Sawirro